Ngaba ubuyazi iProjekthi yamaBali amaFutshane? | Uncwadi lwangoku
Uncwadi olufutshane luqala ukushiya ubuthongo balo obude ukuze luxhomekeke kubuchwephesha obutsha kunye nakwimfuno yokufunda ngokuhambelana nala maxesha akhawulezileyo ukuze iphinde ibuye indawo yayo yangaphambili. Omnye wemizekelo ebalaseleyo yile Iprojekthi yamaBali amafutshane, iprojekthi ezelwe ukulungiselela ababhali beemikes, iihaikus kunye namabali avela kwihlabathi liphela kwinto esele babhaptiziwe njenge "Spotify wamabali amafutshane". Ngaba uza kubona iProjekthi yamaBali amaFutshane?
Amabali aphuma emgceni
Ngexesha leminyaka embalwa edlulileyo, ayingabo bonke abantu abahlala phantsi ukuze bafunde inoveli enjeya kuba ewe, okanye bafunde inqaku elipheleleyo; hayi. Sisebenza ngemifanekiso etsala amehlo, iintloko ezibonisa amehlo kunye nokufundwa esinokukugqiba kwimizuzu engaphantsi kwe-10, okanye mhlawumbi i-5.Inyani apho uncwadi olufutshane lufumene olona manyano lukukungena ebomini bethu kwakhona.
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, inkampani yaseFrance Ufutshane Uqale ukushicilela amabali koomatshini abakwizikhululo zikaloliwe ezahlukeneyo eFrance. Ngokulandelayo, ababhali abatsha bavela kwi-Intanethi enkosi Amabali amancinci abhalwe kwi-tweet yomlinganiswa ayi-140 kunye neeprojekthi ezinje ngeProjekthi yamaBali amaFutshane zizalwa ngenjongo yokufikelela kutyekelo kwi-crescendo kule minyaka ilishumi idlulileyo.
Ngaphantsi kwesiqubulo esithi "Iindaba eziwela umgca", Iprojekthi yamaBali amafutshane Inethiwekhi yentlalo esekwe ngumhleli wase-Israeli u-Adam Blumenthal kunye nombhali wase-Ecuador uMaría Fernanda Ampuero, othi yena alungelelanise indawo yeSpanish yewebhusayithi, ikwafumaneka ngesiNgesi nangesiHebhere. Inyathelo elivelayo njengekhonkco phakathi kwababhali, abaguquleli kunye neengcali ezivela kwilizwe lokupapasha ligxile kuncwadi olufutshane ngohlobo lwamabali ahlukeneyo avela kuzo zonke iindawo zomhlaba kwaye aguqulelwe ukuze afikelele kubo bonke abafundi.
Injongo yabasunguli beprojekthi kukulandela amabali enza ukuba abanye ababhali baziwe kwaye, emva kokubancomela, babe yinxalenye yelifu elikhulu lokubhala apho belingana khona ukusuka eVirginia Woolf ukuya eGraham Greene ngokusebenzisa abanye ababhali abasakhulayo okanye abangaziwayo.
Ukongeza, zombini iwebhu kunye app thembele kwi amabali azo zonke iintlobo (i-surreal, uthando, inkanuko), icandelo leencwadi ezimanyelwayo (ibali ngalinye elibhaliweyo lilandelwa yinguqulelo yeaudiyo) kunye isihluzo seengcebiso evumela ukuba uqhubeke nokufumanisa abanye ababhali ababhali babo bahambelana nesihloko osithandayo.
Ekuqaleni bakhulelwa ukwenza ababhali abathetha iSpanish baziwe, i-TSSP ibisongeza abalandeli kwaye inomdla wokwaphula imigca yolwimi kunye nokuvumela iSpanish ukuba ilonwabele ibali lombhali ovela eTokyo okanye umhleli wase-Ecuador ukuba alazi ibali lesiGrike. umzobi.
Yile ndlela esebenza ngayo le projekthi inkulu, eqale uhambo lwayo ngo-2016 kwaye, ngethemba, ebeka iziseko zomkhuhlane omtsha omfutshane, omfutshane; ngamabali amatsha.
Ucinga ntoni ngeli nyathelo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ngaba ubuyazi iProjekthi yamaBali amaFutshane?
NdingumChile, ndibhala eyam imibongo kunye namabali amafutshane ayoyikisayo.
Ngaba ikhona i-imeyile apho ndingathumela khona umsebenzi wam?
Iincwadi eziza kusebenza kwiimvakalelo kunye nabantwana